Caalamka, 01 May 2018
Daacish oo sheegatay qaraxyadii Kabul
Kooxda Daacish ayaa sheegatay mas,uuliyadda laba qarax Isniintii shalay lagu dilay ugu yaraan 26 ruux oo ay ku jireen sagaal saxafi gudaha magaalada Kabul ee caasimadda dalka Afganstan.
Fallanqeyn: Wada hadallada labada Korea
Qaraxyo lagu dilay suxufiyiin badan oo ka dhacay Kabul
Qaraxyo mataano ah oo ka dhacay magaalada Kabul ee caasimadda dalka Afghanistan ayaa maanta dilay ugu yaraan 26 qof, oo ay ku jiraan suxufiyiin badan.
Kim Jong Un: Waa la Xirayaa Xarumaha Nukliyeerka
Hoggaamiyaha Kuuriyda Woqooyi Kim Jon Un ayaa wacad ku maray inuu xirayo xarunta hubka nukliyerka ee dalkiisa bisha May oo uuna hanaankaasi u furan yahay khubarada iyo wariyayaasha kuuriyda Koofureed iyo Maraykanka
Dowlada Kanada oo 18 Milyan ugu Deeqday Soomaaliya
Dawladda Kanada ayaa ugu deeqdey Soomaaliya lacag gargaar ah oo wadarteedu dhantahay 18 Million oo dollar, oo loogu talogalay dadka Abaarta iyo roobabku saameeyeen ee danyar ta ah.
Hoggaamiyayaasha Labada Kuuriya oo Kulmay
Hoggaamiyaasha Labada Kuuriya ayaa ku heshiiyay in ay ka wada shaqeeyaan sidii hubka niyukleerka looga baabi'in lahaa dhulka Kuuriya, kadib kulan taariikhi ah oo ay ku yeesheen dalka Kuuriyada Koofureed.
Q.M. oo Ku Baaqday in La Baaro Dadkii Lagu Laayay Yemen
Hey'adda xuquuqda aadanaha ee Qaramada Midoobay ayaa ku baaqday in baaris lagu sameeyo dilalka tobonnaan qof oo dhowrkii maalmood ee la soo dhaafay uu isbaheysiga uu Sacuudigu hoggaaminayo duqeyn ku diley gudaha dalka Yemen.
Toronto: NIn Gaari Jiirsiiyay Dad oo Maxkamad La Hor-keenayo